Ifowuni ebalulekileyo kaAndy Ruben iza kufika eYurophu nangona inendlela encinci | Iindaba zeGajethi
U-Andy Ruben we-smartphone ebalulekileyo uza kufika eYurophu nangona ngendlela encinci
Kwiminyaka yakutshanje sithethile kaninzi malunga noAndy Rubin, omnye wabasunguli be-Android nabadlale indima ebaluleke kakhulu kuGoogle de Washiya ukwenza ezinye iiprojekthi. Kodwa eyona iye yatsala ingqalelo yeyona smartphone idumileyo awayesebenza kuyo kwaye, ngokokutsho kwakhe, iyakuba yinxalenye yecandelo.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo wayibeka ngokusemthethweni kodwa okwangoku umhla wokukhutshwa sele uhlangatyeziwe ngaphandle Akukho ndlela inokufikelela emzimbeni kwisiphelo ukuvavanya izibonelelo ezibanga umenzi wazo. Okwangoku, ngokwe-Financial Times, esi siginali sitsha siya kufumaneka eYurophu naseJapan.
URubin utyikitye isivumelwano esikhethekileyo kunye nomqhubi waseMelika ukuqinisekisa ukusasazwa ngendlela ekhawulezayo nelula kuneGoogle ayenzileyo ngePixel kunye nePixel XL, isiphelo sendlela esiphantse sibe ngunyaka emva kokunikezelwa kwayo sifumaneka kumazwe amathathu. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba naseYurophu Iya kufika kuphela ngomsebenzisiNangona ilizwe okwangoku ekuphela kwalo kuthethathethwana ngokufakwa kwesi sixhobo kwikhathalogu yabasebenzi yi-United Kingdom.
I-PH-1 ebalulekileyo isinika isikrini kwifomathi ye-18: 9, ngesisombululo seepikseli ezingama-256 x 1,312 kunye nescreen esingu-5,7-intshi. Ngaphakathi kukho I-Snapdragon 835, i-Adreno 540 GPU kunye ne-4 GB ye-RAM. Ngokumalunga nokugcinwa kwangaphakathi, i-PH-1 ebalulekileyo ibonelela nge-128 GB yokugcina kuguqulelo olunye, ibhetri eyi-3.040 mAh kunye ne-Android N njengenkqubo yokusebenza. Ukuba sithetha ngeekhamera, esi siginali sisinika ikhamera ngasemva eyi-13 mpx kunye nomphambili we-8 mpx. Njengoko benditshilo apha ngasentla, ngalo mzuzu akukho sigxina ngokusesikweni apho sinokubona khona ifowuni ngokwasemzimbeni kunye nendlela esebenza ngayo inkqubo yokusebenza. Okwangoku kufuneka siqhubeke nokuhlala ukuze sonwabe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » U-Andy Ruben we-smartphone ebalulekileyo uza kufika eYurophu nangona ngendlela encinci
Ukuvuza kweMoto G5S Plus kutyhila iinkcukacha kunye nomfanekiso omtsha
I-WhatsApp ivinjiwe e-China, ixhoba elitsha le-Great Firewall